Collectif Tany: manohitra ny tetikasa Toliara Sands | NewsMada
Collectif Tany: manohitra ny tetikasa Toliara Sands
Niakatra tao amin’ny televiziona frantsay TV5 Monde, any Frantsa, ny fikambanana Tany, ny 24 aogositra teo. Notateriny tao ny diabe nataon’ny vahoaka, ny 17 aogositra, tany Ankilimalinike sy Tsianishia ary ny 23 aogositra tany an-tampon-tanànan’i Toliara. Manohana ity hetsiky ny vahoaka ity ny fikambanana Tany, satria tandindomin-doza, ho potika ny tontolo iainana ary ho maro ny mponina horoahina amin’ny taniny sy ny toeram-pamboleny sy fiompiany.
Anisan’ny naseho, nandritra ity fandaharana tao amin’ny TV5 monde ity, ny fandraisam-pitenenana nataon’ny mpitarika ny vahoaka, ilay mpanakanto malagasy, i Théo Rakotovao, nilazany, fa “mpanjono izahay, mpamboly ary mpiompy. Hanapotika zavatra maro ity tetikasa fitrandrahana fasimainty ity, indrindra ny kolontsainay. Tsy azo ekena izany ary tsy araka ny tokony ho izy”.
Tao avokoa ny sokajin’olona rehetra
Nambaran-dRtoa Randriamaro Zo, mpandrindra ny Foibe fikarohana sy tohana ho an’ny vahaolana ho an’ny fampandrosoana (Craad-OI), koa fa nasehon’ny vahoaka manontolo any Toliara ny fanoherany ity tetikasa ity satria hanafoana ny foto-piveloman’izy ireo sy ny tontolo iainana. Mazava izao fa manomboka ny tolona ary tsy hitsahatra raha tsy foanana marindrano ny fahazoan-dalan’ny Toliara Sands.
Naneho ny fitovian-keviny amin’ny vahoaka koa ny solombavambahoaka voafidy tany Toliara, Randrianasoloniaiko Siteny. Manahy mafy izy amin’ny fahasimban’ny nofo sy ny tsiron-tany, miampy ny fahapotehan’ny ala.
Nilaza tao amin’ny TV5 Monde ny tompon’andraikitry ny fikambanana Tany, Rakotondrainibe Mamy, fa zavatra tsara notsoahina tamin’ity fihetsiketsehan’ny vahoaka ity ny fandraisana anjaran’ny sokajin’olona sy ny foko samihafa, azo itarafana ny Malagasy manontolo.